Maxaa ka soo baxay kulankii dhexmaray madaxweynaha Turkiga iyo Mareykanka? – Bandhiga
Home Maxaa ka soo baxay kulankii dhexmaray madaxweynaha Turkiga iyo Mareykanka?
Maxaa ka soo baxay kulankii dhexmaray madaxweynaha Turkiga iyo Mareykanka?
in Maxaa ka soo baxay kulankii dhexmaray madaxweynaha Turkiga iyo Mareykanka?
Xili uu khudbad u jeedinayay Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan Baarlamaanka dalkaasi ayaa waxa uu ka hadlay howlgallada ciidamadiisu kawadaa Waqooyiga Suuriya ee lagu beegsanayo kooxaha Kurdiyiinta .
Erdogan ayaa diiday in wadahadal toos ah ama mid dadban lagu dhameeyo dagaalka u dhaxeeya milatariga Turkiga oo duulaan ku qaaday Todobaad ka hor kooxda Turkiga u yaqaano argagixisada ee Kurdiyiinta.
Madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale kulan la qaatay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo xoghayaha arimaha dibada Mike Pompeo waxaaba uu u sheegau sheegay in Turkiga yoolkiisa uu yahay in soo afjaro dagaalyahanada kurdida ee (SDF).
Wuxuu balan qaaday in Turkiga uu ciidankiisa soo saari doono hadii dagaalyahanada SDF ay isaga baxaan deegaanada ay ku Sugan Yihiin.
Inkastoo Turkiga uu cadaadis caalami ah uu kala kulmayo dagaalka ay ciidankiisa ku galeen waqooyiga Suuriya ayaa hadane mr Erdogan wuxuu tilmaamay in aysan jirin cid ka hor istaagi karta Howlgalkooda.
“Waan wadi doonnaa dagaalkeena ilaa laga helo deegaan nabdoon oo ay ku laaban karaan malaayiinta qaxootiga Suuriya ee ku sugan dalka Turkiga”ayuu yirir Erdogan
Dagaalyahanada Kurdida ayaa dhankooda heshiis la galay dowlada Suuriya inkastoo ruushka uu ka digay dagaal dhexmara milatariga labada wadan ee wada jooga magaalada Manbij.